事前評価テスト | 株式会社 惣助
အလျားလိုက်အင်အားသုံးလျှောက်ထားသောအခါ　ချိတ်ဆက်ခြင်းအစိတ်အပိုင်းများလှည့်နေစဉ်သို့သော်မလှုပ်နဲ့ အဆစ်နည်းလမ်း ([suiheiryoku]gakakattatoki [setsugoubu]ga[kaiten]wasuruga[idou]shinai[setsugouhouhou])
ပစ္စည်းများချိတ်ဆက်တစ်ခုမှာနည်းလမ်း ပစ္စည်းများအကြားအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုချိတ်ဆက် မူဘောင်　ပြင်ပအင်အားစု　ထည့်ပါ　အစိတ်အပိုင်းများကိုပုံပျက်နေကြသည်သို့သော်ချိတ်ဆက်ထားသောအစိတ်အပိုင်းမျာပုံစံမပြောင်းပါဘူး နည်းလမ်း　ပုံမှန်ဥပမာတစ်ခုမှာ Rahmen ဖွဲ့စည်းပုံဖြစ်သည်　Beamကွေး ညှပ်စိတ်ဖိစီးမှု တိုင်သို့တိုက်ရိုက်ထည့်ပါ
([buzai]no[setsugouhouhou]no1[tsu]. [buzai]to[buzai]no[setsugoubu] [honegumi]ni[gairyoku]ga[kuwa]wari[buzai]ga[henkei]shitemo[setsugoubu]ga[henkei]shinai[hou]dearu. [daihyouteki]na[rei]garāmen[kouzou]de [hari]no[ma]ge sen[danouryoku]wosonomama[hashira]ni[tsuta]eru))
ご購入はこちら！﻿学習上の注意 鉄骨製作管理技術者に求められる能力と知識鉄骨構造の主な構造形式架構形式による分類 ラーメン構造 柱と梁を剛接合 柱・梁材の曲げで外力に抵抗 外力が加わって部材が変形しても両部材の交わる...
ဆွဲအားနှင့် ပတ်သက်၍ 1mm စတုရန်းလျှင် 25 kgf အင်အားတစ်ခုသည် elastic range အတွင်းတွင်ရှိသည်။ ထို့ကြောင့် force အားဖယ်ရှားလိုက်လျှင်မူရင်းသို့ပြန်သွားလိမ့်မည်။ 25kgf ကျော် ထာဝရကွာဟချက်ရှိနေဆဲဖြစ်သည်　နောက်ထပ်ပါဝါ အကယ်၍ စွမ်းအင်သည် ၄၁kgf သို့ရောက်ရှိပါက၎င်းသည်ကျိုးပဲ့သွားလိမ့်မည်
([hippa]rino[chikara]ni[tai]shite1mm[kaku][ata]ri25kgfno[chikara]madewa[danseihaninai]nanode[chikara]wo[nozo]keba[moto]ni[modo]rimasuga 25kgfwo[ko]eruto[eikyuu]hizumiga[noko]tteshimaimasu. sarani[chikara]ga[ma]shite41kgfni[tas]suruto [hadan]shimasu)
問13　板の重さ　鉄の比重
問17　材料【ざいりょう】　SS　SM　SN
問19　フルペネ　名称【めいしょう】
問20　隅肉【すみにく】　名称【めいしょう】
問21　フルペネ　特徴【とくちょう】
問25　積層工法【せきそうこうほう】　建逃【たてに】げ
Copyright © 2018 株式会社 惣助 All Rights Reserved.